မီဒီယာလေ့လာမှု – Live the Dream
မီဒီယာရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မှူနဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ၊ မီဒီယာရဲ့ လူတွေနှင့် လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းပေါ် လွှမ်းမိုးမှူတွေကို အဓိကလေ့လာရတဲ့ဘာသာပါ မီဒီယာပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် ဥပမာ စာအုပ်တွေ သတင်းစာတွေ၊ TV တွေ ၊video တွေ၊ internet တွေ ပါ အဲ့ဒီမီဒီယာတစ်ခုချင်းဆီရဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်မှူတွေ အခန်းကဏ္ဍတွေကိုလည်း နားလည်ထားရပါမယ် တစ်ခုချင်းဆီရဲ့ လူတွေအပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းကိုလည်း သေချာလေ့လာရမှာပါ
Media studies မှာ ဆိုရင် အဓိက နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်
Social/economics field ရယ် Expression field ရယ်ပါ
Social / economics fieldအောက်မှာ ဘာသာရပ်ခွဲ (၃) ခု ထပ်ရှိပါတယ်
၁. Media society psychology study
အဲ့မှာဆိုရင် အဓိကကတော့ မီဒီယာ ရဲ့ တကယ့်လက်တွေ့ဘဝအပေါ် လွှမ်းမိုးမှူကို လေ့လာရတာပါ
လူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ လူတွေရဲ့အမူအကျင့်တွေ ကို မီဒီယာက ဘယ်လိုလွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတာလည်းလေ့လာရပါတယ်
၂. Media Economics studies
အခုလို ဈေးကွက်စီးပွားရေးကာလမှာ လုပ်နေကျတဲ့ တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့media companyတွေရဲ့ ဖြောင့်မတ်မျှတမှူကိုှု အလေးထားပုံ ကြော်ငြာထည့်သွင်းလိုသော စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးကို မည်ကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပုံ စတာတွေလည်း လေ့လာရပါတယ်
၃. Media Legal studies
မီဒီယာတွေနှင့် တရားဥပဒေကြားက ဆက်နွယ်မှူကို လေ့လာရပါမယ် လွပ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တွေ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှူ(privacy protection)တွေ အခုနောက်ပိုင်းအဖြစ်များတဲ့ digital mediaပေါ်က copyright အမှူတွေ စသည်ဖြင့် မီဒီယာနှင့်ပတ်သတ်တဲ့ ဥပဒေရေးရာတွေကို လေ့လာရမှာပါ
Expression Field အောက်မှာလည်း ဘာသာရပ်ခွဲ သုံးခုရှိပါတယ်
၁. Print Media
အဓိကကတော့ သတင်းစာ တွေ မဂ္ဂဇင်းတွေစတဲ့ printed media တွေရဲ့ သဘောသဘာဝတွေ ကို လေ့လာရတာပါ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်စားပြုနိုင်မှူကိုလည်း လေ့လာရပါတယ်
၂. Video media
TV တွေ videoတွေ စတဲ့ ရုပ်သံတင်ဆက်မှူတွေနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ မီဒီယာတွေရဲ့ သဘောသဘာဝကို လေ့လာရပါတယ် သူတို့ရဲ့ ကိုယ်စားပြုနိုင်မှူကိုလည်း လေ့လာရပါတယ်
၃. IT Related Media
ဒီမှာတော့ IT နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ မီဒီယာတွေကို လေ့လာရမှာပါ website တွေ 3D image တွေ တခြား multimedia တွေမှာ သတင်းအချက်အလက်တွေ ဘယ်လိုဖော်ပြတင်ဆက်လို့ရတယ်ဆိုတာကို လေ့လာရမှာပါ အဲ့ဒါတွေရဲ့သဘောသဘာဝတွေ ကိုလည်း လေ့လာရမှာပါ
ပညာရပ် နဲ့ လက်တွေ့ဘ၀ ဆက်စပ်မှု
ဒီဂျစ်တယ်အသံတွေက လူနေမှုဘဝမှာ ဝင်ရောက်လာ
အခုခေတ် လူနေမှုဘဝတွေမှာ ကွန်ပျူတာဒီဂျစ်တယ်ရဲ့ ဆန်းသစ်တဲ့ အသံတွေဖန်တီးမှုက လူသားတွေကို ကောင်းစွာအကျိုးပြုလာတယ်။ ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာတွေကို လူနေမှုဘဝနေရာမှာ ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့အစားထိုးအသုံးပြုလာတဲ့အတိုင်း နောက်လည်းပိုမိုတွင်ကျယ်အောင် တို့ချဲ့အသုံးပြုလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ဂီတသံဆိုတာ ဖန်တီးမှုအနုပညာတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုမှာတော့ မည်သူမဆို ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ခေတ်ဖြစ်နေပြီ။ စည်းချက် တေးသွားသံစဉ်တွေကို ပုံတွေ၊ ကာတွန်းရုပ်ကြွတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး ကွန်ပျူတာဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာ သို့မဟုတ် program တွေရဲ့ အရေးပါမှုတွေကို မြင်တွေ့နိုင်ပါပြီ။
မီဒီယာရဲ့အရေးပါမှုက လူနေမှုစနစ်ကို ဖန်တီးနေပါတယ်
လူနေမှုဘဝတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ မကြာသေးမီနှစ်တွေက ဆေးဝါးကုသရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေး၊ ဝေးလံသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် သတင်းအချက်အလက် ကွန်ယှက်အသုံးချဖို့ သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုစနစ်နှင့် ဆေးဝါးဆိုင်ရာ image processing တွင် ဒီဂျစ်တယ် မီဒီယာများစတင်အသုံးပြုလာကြတယ်။ ထိုသို့မီဒီယာလူမှုကိစများ၏ သတင်းအချက်များ စတင်အသုံးပြုလာကြသော်လည်း အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း လုံခြုံရေးနှင့် privacy ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး မီဒီယာလူမှုဗေဒနှင့် မီဒီယာဥပဒေလည်း အရေးကြီးသောအခန်းကဏတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။
သင့်ရဲ့ဧည်ခန်းထဲမှာပဲ အချိန်မရွေး နေရာဒေသအသီးသီးက သတင်းအချက်လက်တွေကို ဖလှယ်နိုင်ပြီ
သတင်းအချက်အလက် အင်တာနက်ဖြင့် ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ ချက်ချင်းသတင်းအချက်ပို့ခြင်းကို အချိန်မရွေးလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီ။ သတင်းအချက်အလက်တွေ တိုးတက်နေသော်လည်း၊ ဗီဒီယို၊ ပုံနဲ့ အသံတွေပါတဲ့ မီဒီယာသတင်းအချက်ပမာဏများလာတဲ့အခါမှာတော့ ဒါဟာ နောင်အတွက်တစ်ဆင့်တိုးတက်ဖို့ အခြေအနေတွေပေါ့။
Featured Listing, Media Studies, ရုပ်သံ နှင့် အနုပညာ ဖန်တီးမှု
ခြေလှမ်းများ နှင့် မနက်ဖြန် (၅) – ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ